“PATSA INDRAY MAHANDRO…” – MyDago.com aime Madagascar
“PATSA INDRAY MAHANDRO…”
Roa herinandro taty aorian’ny 26 jona 2012, Faha-52 taonan’ny Fahaleovantena, dia mbola nifety indray ny “gasy”. Arahabaina ny Maki de Madagascar nandresy an’i Zambie tamin’ny isa 57≠54.
Feno hipoka tokoa Mahamasina, tonga maro ny mpitia baolina lavalava. Faly fa nadresy saingy fifaliana mandalo ihany izany. Na ny mpilalao notambazana vola be, izay mety ny ampahany tamin’ny nampanantenain’i Rajoelina Andry aza no ho azo dia efa faly ihany koa. Tsapa fa izay mahazo vola be rehetra, amin’izao tetezamita izao, dia manao ny ainy tsy ho zavatra tokoa hatrarana ny tanjona. Na izany aza efa mahavita izay tokony ho vitany izay azo ka andrandraina.
Ny tsy mpilalao baolina lavalava kosa sady lany vola nidirana tao Mahamasina no miverina amin’ny tsy fisina an-davanandro indray. Efa sady mba nahazo tee shirt aloa no adino tapa-kandro ny onjam-piainana.
Ny manahirana anefa dia ny fitakiana ara-drariny ny zon’ny mpiasampanjakana, na dia efa misy an-taonany aza no tsy azo dia arirarira hatrany. Niafara tamin’ny fisamborana ireo mpitaky aza izany.
Satria ve tsy misy andrasan’ny mpitondra amin’izao tetezamita izao ve amin’izy ireo? Etsy an-kilany koa tsy misy firaisan-kina eo amin’ny samy mpiasampanjakana, amin’ny ankapobeny. Toa samy miaro ny rambony tsy ho tapaka ny ankamaroany.
Raha ny toe-draharaha sy ny toetsaina misy ankehitriny dia marina ilay fitenenan’ny “gasy” hoe:”raha maty aho matesa rahavana, fa raha maty rahavana matesa ny omby.”
Tsy misy intsony ny manana ilay toe-tsaina “iray vatsy iray aina.” Ny mpiasampanjakana nefa dia iray ihany no mamatsy azy dia ny olompirenena mandoa hetra. Ny mpamatsy azy ireo anefa latsaka ao an-davaka mangitso-kitsoka. Miandrandra ny fanavotan’ireo tsy maintsy vatsiana. Ka hamonjy ireto mpitrongy vao omana, mpamatsy azy, ve ireo mpiasampanjakana minia mikipy sy tsy mihaino ny mpiray tanindrazana aminy ireto, ka hiara-mirona amin’ireo efa mihoitra hialàna amin’ “iny lalàn’iny” izay efa kizo fara?
Mahavariana ihany koa ireto Sefom-pokotany tsy nandray ny tambi-karamany efa am-bolana maro nefa dia mitapikitra ao ihany. Tsy hahitan-teny, tsy sahy mitaky ny zony. Rehefa milamina kosa ny tany dia handray vola be koa ry zareo ka aleo miharitra eo ihany sao hesorin’ny mpitondra eo ka ho very izay nantenaina.
Anisan’ny nahaliana ihany koa ny fivorian’ireo Tomponandraikitra eo anivon’ny Diosezin’ Antananarivo, teny Ambohipo, momba ny raharaham-pirenena. Indrindra ny hevitry ny Finona katolika momba ny fanelanelanan’ny FFKM mba hivoahana amin’izao krizy izao.
Marinatokoa fa ny ny fifamelana dia mitaky fieken-keloka (tsy kofesy).
Misy mivoy fa tokony hihaiky ny “eloka” vitany tamin’ny Firenena sy ny olompirenena ireo mpitondra teo aloha sy ny amin’izao fotoana izao. Tsy tadidy sa hodiana tsy fantantra fa efa nifona tamin’ny Malagasy i Ravalomanana Marc? Ireo olona nanimbazimba sy namelaka temaina ny “Olomboahositr’Andriamanitra” teny amin’ny EPISCOPAT, Antanimena ve efa mba nifona tamin’iny olona iny? Ka “esorina aloa ny andry eo amin’ny masonao vao mijery ny sombi-kazo eo amin’ny mason’ny hafa ianao.”
Ao ny miantso an’Andriamanitra manolohana izao toe-draharaha izao. Takonana anefa ny marina, ka atao ahoana no hitia an’ Andriamanitra tsy hita nefa ny rahalahinao hitan’ny maso aza tsy tina.
Ka raha fampihavana resahina dia marina ny voalaza teny Ambohipo.
Ny lalàna hatongavana amin’izany dia “miombona” aloha vao mety hihavana avy eo.
Atao ahaona anefa ny hihombona raha tsy mifanatri-tava? Mifanipaka ny hevitra raha sady manakana ny fihaonana no mitaky fiombonana sy fieken-keloka. Atao fantatry ny Malagasy tsy vakivolo izany fa tsy atao an-takonana.
Tsy hifarana anefa izao krizy izao raha tsy tonga amin’io tetika voalaza eo ambony io isika. Tsy fifidianana no mamaha ny olana na entina hamarana izao krizy izao satria hiteraka krizy hafa indray izany.
Fifidianana no natao taorian’ny krizy tamin’ny 1972, 1975, 1991, 1996, 2002, ka nahasakana ny krizy ve ireny?
Ny zavatra hita amin’izao fotoana izao dia misy ny mampitaha zavatra tsy azo hampitahaina, toy ny lakana sy ny zahatra.
Efa fieken-keloka no nataon’ny Kly Charles Randrianasoavina matoa izy nanao ny fitantarana ny nataony tamin’ny 2009. Ireo nikononkonona iny fanonganam-panjakana iny tsy mbola nisy niaiky izany.
Nifety nandritra ny herinandro mahery tamin’ny 26 Jiona, nitakiky taorian’izany. Faly nympilalao baolina lavalava fa nomena vola be, tsy mbola fandray. Faly ny mpitia baolina nadritra ny tapakandro, fa aiza indray no hahita ny vola hanonerana ny lany tamin’ny tapakila. Tsy maintsy miaiky heloka izay nanao ratsy tamin’ity Firenena ity, na tamin’ny mpiray tanindrazana aminy, efa natomboka tamin’ny tena manokana ve izany.
Ka raha naazo izay niriny ny olombelona androany, aoka ihevitra ny ampitso koa fa tsy ho falin’ny “patsa indray mahandro”.
Patsa iray tsy omby vava !
12 pensées sur ““PATSA INDRAY MAHANDRO…””
Toa nisy nimenonmenona ny MAKI fa 4 millions d’Ariary isan’isany no nampanantenain’i DJ fa tsy io . Toa tsy ampy antsasaky ny 4 millions d’ariary akory rehefa nozaraina.
Tairo ny grève générale fa ampy izay ny fampanatenana poakaty isan’andro izao eh !
Fa vaovao ve izany e!!!impiry daomelina no mba nitana ny teniny???IMPIRY???
mbola fandavahana lavaka hilevenany ihany izany koa inona moa???
Zara aza nisy izay, ireto izay nanana ny maty (manam-boninahitra )t@ nafitsoky ny dahalo aza ohatrinona fotsiny?
ny razana mbola tsy hita popoaka @’io ,ny vola azo fandatsana fotsiny.
Toa ohatran’ny tsy mampino ny filazana fa nanana ny kolon-tsainy ny malagasy dia ny fihavanana izany na koa hoe nisy tokoa ilay izy fa tena potika noho ny fahaizan’ny mpanjanaka manimba kolontsaina, satria raha ny zava-misy no jerena dia olona tena tsy tia havana ny malagasy fa tia tena sy be fialonana, jereo izao ny manjo amin’izao fotoana , mandresy ny Makis , tena tsara izany fa saingy izao ny olana , maninona no omena vola be toy izany nefa lazaina fa tsy misy vola ny fanjakana andoavana ireo volan’ny mpiasampanjakana izay mitaky izany, sa an’ny filo Rajoelina madiodio ny vola dia ataovy ary ny ampamoaka e! Viva ve dia hampiditra vola be toy izany sa injet sa inona koa…..sa efa nitombo ny fihariana nandritra ny tetezamita.Lazaiko fa tsy tia havana ny malagasy satria omena vola ny Makis fitiavana ve no nanomezana azy sa mba hampitombo ny elanelana efa misy eo amin’ny saranga roa tsy mitovy, dia ny faritra hiva hoy isika sy ny saranga antoniny dia ny mpiasampanjakana antoniny, vao mainka rangitina ny malagasy hiady an-trano toy izany, jereo tsara migrevy ny dokotera , misy olona manakorotana , dia faly ny FAT fa izay no fomba fiadiny mampiady ireo saranga roa ireo foana fa tsy hainy izany hijoro ho ray aman-dreny mandray andraikitra ka hitady vaha olana amin’ny krizy ka hampiantra tsy misy atakandro ny FDR, toy izay koa ny mpampianatra dia ny mpianatra sy ny ray aman-dreny no asaina miady amin’ny mpampianatra, fa i filo Rajoelina tsy mandray andraikitra , nefa izy no nahatonga izao krizy izao , izy no te ho filoha , te hanankarena amin’ny tsy nisasarana dia ny malagasy no ampiadiana,ny fanomezana vola ny Maki dia mbola manamafy ny fanonganam-panjakana , ny fanimbana ny Tiko dia mbola mitohy ihany ny fampiadina mba hanamafy ny seza, ka inona no fihavanana hiravona eo, fa resaka ny an’ny Katolika
12 juillet 2012 à 19 h 10 min
Domelina le roi de la mauvaise foi, si tant est qu’il en ait une !
Domelina le roi des bobards, de la vantardise et de la suffisance, dans ses oeuvres maléfiques !
Le peuple n’a plus le droit de manifester ni de faire grève, CAR IL MANGE MAINTENANT À SA FAIM, VIT DANS DANS LE LUXE, ET SURTOUT EN TOUTE SECURITE !!
A ceux qui osent revendiquer quelque chose : Circulez, y a rien à boire !
Tsy mety mivoaka ! Ilay voalohany moa adino ny « silasy » iray, fa mety ho hitanareo ihany io !
ilaikkely dit :
Tsy dia manana holazaina betsaka, fa ny tena olana eto amintsika dia ny fitondra-tenan’ny jiolahy mitam-piadiana (antsoina oe MIARAMILA), tsy ankanavaka io na dia azo lazaina aza fa ampahany vitsy no miraka amin’i Domelina sy miaro azy amin’ny fomba rehetra ao.
Nofonofiso ange oe mandray ny andraikiny tanteraka ny jiolahy mitam-piadiana de miala tsy manao politika ary miaro ny ara-dalana tsy momba ny atsy sy ny eroa(neutre)fa ny androtrio ihany de efa miondrana sesitany daholo ry Radomelina mianakavy sy ny mpiray petsapetsa aminy e!
Ny aina no mahatezà
13 juillet 2012 à 14 h 56 min
Atolotro ho an’ny malagasy mijaly, sy mitolona andro aman’alina !
Tsy afaka mampiseho horonam-peo sy sary, rehefa miangaly azy amin’ilay Stainihoay, dia ity mba ankafihizo !
Ka ny ahatongavana @’io mihintsy no mbola lavitra be ilay lalana ry Ilaikkely a!
dia aza hadino koa fa mbola eo ny mpanao Bugby, atao fanainiana tohanana hatrany @
Tendakely fa be sandry sady be mokony.Tsy ny miaramila ihany an!izay hatahotahorana dia vonoina na mivantana izany na
an-kolaka na VIDIANA tsotra izao e!ka eto no manalavitra ilay lalana makany @ ilay fahafahana.
Izaho ihany no tsy tian’ireto videon’ialahy ry Kintana tsy misy mety mandeha,
kamo be aho hanokatra Ordi, ilay andro mahakamo be manjombona, manorana
malahelohelo be mahasosotra tena 0 ny môraly, hatr@’izao aloha tsy msy vao2 mba tsara koa ato fa manome litika
daholo no betsaka.
13 juillet 2012 à 16 h 32 min
Ho an’izay mazoto dia tsara mba hiverenana kely ireo ambony ireo, na dia mananfitohana aza !
Io farany io kosa mandeha, fa aza « kamo be tenda » ê ! Izahay izao mbola hijery dartifisy sy handihy any amin’ny pompié, na avy aza ny orana ! Hi hi hi !
Haiko io » balle Pompier « io, angaha mbola misy foana???efa tao in-1 mandeha aho.
Mazotoa e!ho jereko rė fa aoka aloha a!!efa hoe izaho ihany no tsy tiany koh!!Tsy mandeha e!
na ilay voalohany na ilay faharoa.
Précédent Article précédent : DIDIER RADERT : VOANDALANA MIHANTONA NO NENTIN’NY BERIZIKY
Suivant Article suivant : Voarara amin’ny TVM ny Ministra Ankolafy Ravalomananana